केटीले खोल्छे, केटाले मज्जाले गर्छ र गरेपछि भित्र छिर्छ ? हेर्नुस हसाएरै मुर्छा पर्ने भिडियो – Complete Nepali News Portal
केटीले खोल्छे, केटाले मज्जाले गर्छ र गरेपछि भित्र छिर्छ ? हेर्नुस हसाएरै मुर्छा पर्ने भिडियो
ScotNepal May 10, 2021
काठमाडौ । अहिले नेपालका अधिकांश जिल्लामा लकडाउन र निषेधज्ञा जारी छ र काठमाडौ लगायत जिल्लामा अहिले २ हप्ता हुन लागेको छ निषेधज्ञा भएको, जनताहरु रोगले भन्दा नि भोकले मरिन्छ कि भन्ने चिन्तामा छन । जसोतसो खुशी, सुखी र स्वस्थ भएर बाच्ने प्रयासमा छन सबै नेपालीहरु र साथमा बिश्वनै आक्रान्त त बनिरहेकै छ ।
यसै बिच आज हामी यो लकडाउनमा तपाईलाई बोर फिल नहोस भनेर नया केही रोमान्चक भिडियो लिएर आएका छौ, जहा २ जना युवतीस“ग हामीले फन्नी र दिमाग घुमाउने खाले प्रश्न गरेका छौ । यो भिडियो हेरेर तपाई पनि मनोरन्ज लिन सक्नुहुन्छ । २ युवतीस“ग गरिएका यि प्रश्नले हासोको फोहोरा छुटेका छ हेरेर मनपरे सेयर गर्नुहोला —